Fanamarinana ny vanim-potoana faha-10 sy ny fihaonambe an-tampony manerantany
Home Fanamarinana ny vanim-potoana faha-10 sy ny fihaonambe an-tampony manerantany
Volana iray mahatalanjona ho an'ny TRF ny volana jolay 2020, miaraka amina tetikasa roa lehibe iraisam-pirenena. Manohana ny fanerena ny lalàna fanamarinana taona ho an'ny pôrnôgrafia izahay any UK sy manerantany miaraka amin'ny tatitra momba ny Konferansa momba ny Age. Mandritra izany fotoana izany dia manome singa marobe amin'ny adihevitra manerantany momba ny pôrnôgrafia isika amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara amin'ny Fihaonambe 2020 hiato ny fihaonambe an-tsokosoko momba ny firaisana.
Ny Reward Foundation dia mandray anjara amin'ny fiaraha-miasa amin'ny taona 2020 hamaranana ny vovonana an-tserasera an-tserasera manerantany amin'ny 18 ka hatramin'ny 28 Jolay. Manome lahateny telo izahay: Pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny atidohan'ny adolescent; Pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ireo mpampiasa manana aretin-tsaina autistic Spectrum ary ilain'ny fianarana manokana; ary Tondrozotra ho an'ny fikarohana ho avy amin'ny fampiasana sary vetaveta misy olana. Miaraka amin'ny mpandahateny 177 sy mpanatrika maherin'ny 18,000 avy amin'ny firenena maherin'ny 100, io no hetsika lehibe indrindra eto amin'ity sehatra ity.
Ny vaovao tsara dia MAIMAIMPOANA ny fihaonambe. Raha misarika ny fahaliananao izany dia kitiho Eto hisoratra anarana anio ary hiaraka aminay amin'ity traikefa mahatalanjona ity.
Internet pôrnôgrafia sy ny atidoha
Mary Sharpe dia mpandahateny fihaonambe izay niresaka tamin'ny dinika lehibe indrindra tamin'ny 27 Jolay.
Ny Reward Foundation dia mitantana Exhibitor Stand amin'ity fihaonambe ity. Misy ny fifaninanana hahazoana ny iray amin'ireo kopia dimy amin'ny bokin'i Gary Wilson - Ny atidohanao amin'ny pôrnôgrafia.
23/24 Jolay 2020
27/28 Jolay 2020
Fanamarinana taona ho an'ny pôrnôgrafia
Tamin'ny volana Jona 2020, ny Reward Foundation dia niara-nanangana fihaonambe virtoaly momba ny fanamarinana ny taona. Ny mpiara-miasa aminay dia i John Carr, OBE, sekretera an'ny Fiaraha-miasa ho an'ny ankizy ho an'ny ankizy UK momba ny fiarovana amin'ny Internet. Ny lohahevitra dia ny filàna fanamarinana taona momba ny pôrnôgrafia. Ny hetsika dia nahitana mpiaro ny fifanampiana zaza, mpisolovava, manam-pahaizana, tompon'andraikitra amin'ny governemanta, mpahay siansa ary orinasa teknolojia avy amin'ny firenena sivy amby roapolo. Ity no navoaka tatitra farany.
Nandinika ny kaonferansa:
Ny porofo farany avy amin'ny sehatry ny siansa momba ny siansa mampiseho ny vokatry ny fiatraikany be amin'ny pôrnôgrafia amin'ny ati-dohan'ny tanora
Kaonty avy amin'ny firenena maherin'ny roapolo momba ny fivoaran'ny politikam-bahoaka momba ny fanamarinana ny taona an-tserasera amin'ny tranokala vetaveta
Teknolojia samihafa izao no misy mba hanatanterahana ny fanamarinana taona amin'ny fotoana tena izy
Paikady fanabeazana amin'ny fiarovana ny ankizy hameno ny vahaolana teknika
Zon'ny ankizy ny miaro tena amin'ny loza ary manana andraikitra ara-dalàna hanome izany ny fanjakana. Mihoatra noho izany, ny ankizy dia manan-jo hanana torohevitra tsara. Ary zon'ny fanabeazana feno, sahaza ny taona momba ny firaisana ara-nofo sy ny ampahany mety hananany amin'ny fifandraisana salama sy mahasambatra. Ity dia omena indrindra amin'ny sehatry ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazam-pirenena. Tsy manan-jo hanana pôrnôgrafia ny ankizy.
Ny teknolojia fanamarinana taona dia nandroso tamin'ny fipetrahan'ny rafitra mora vidy sy mora vidy. Azon'izy ireo atao ny mametra ny fidirana latsaky ny 18 taona mankany amin'ireo tranonkala vetaveta amin'ny Internet. Izy io dia manao izany miaraka amin'ny fanajana ny zon'ny tsiambaratelo an'ny olon-dehibe sy ny ankizy.
Ny fanamarinana ny taona dia tsy bala volafotsy, fa azo antoka a bala. Ary bala mitodika mivantana handavana ireo mpivarotra sary vetaveta an-tserasera amin'ity tontolo ity izay misy anjara andraikitra amin'ny famaritana ny firaisana ara-nofo na ny fanabeazana ara-nofo ananan'ireo tanora.
Voatsindry mafy ny governemanta taorian'ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo
Ny hany olana fanenenana any Angletera amin'izao fotoana izao dia mbola tsy azontsika an-tsaina hoe oviana marina no hanankery ny fepetra fanamarinana taona nifanaovan'ny Parlemanta tamin'ny 2017. Herinandro lasa fanapahan-kevitra ao amin'ny Fitsarana Avo mety hampandroso antsika.
Hoy i John Carr, OBE, "Tany UK, niantso ny Komisera misahana ny fampahalalam-baovao aho mba hanomboka famotopotorana mba hiantohana ny fampidirana ny teknolojia fanamarinana taona voalohany indrindra, hiarovana ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fahasalaman'ny zanakay. Manerana an'izao tontolo izao, ireo mpiara-miasa, mpahay siansa, mpanao politika, fikambanana mpanao asa soa, mpisolovava ary olona miahy ny fiarovana ny zaza dia manao toy izany koa asehon'ity tatitra amin'ny kaonferansa ity. Ny fotoana hihetsika izao. ”